Biodiversity Vision - Biodiversity Extinction SN
Biodiversity inoreva huwandu uye mhando dzezvipenyu izvo isu tine pasi rese pamwe nekuno. Izvi zvinosanganisira mhuka, zvinomera, fungus, mabhakitiriya uye algae.
Nekuda kwemabasa ezviumbwa izvi zvipenyu zviri kuderera nekukurumidza pasi rose, zvakanyanya zvekuti munhu angazvitora sechiitiko chekutsakatisa. Chiitiko chakakurumbira chekutsakatisa chaive apo madhinosaurs akafa. Zvinogona kupomedzerwa kuti zvipenyu zvakasiyana siyana zvichazopedzisira zvaita saizvozvo mushure mekutsakatika kwema dinosaurs, asi izvi zvinogona kutora nguva yakareba kwazvo uye zvisati zvavapo zvisikwa zvevanhu zvisati zvatsakatika.
Isu tine chikwereti kumazera edu anotevera kuisa parumananzombe kudzikira uku kwakakurumidza kwezvinhu zvipenyu. Nyika isina zvipenyu zvinokatyamadza uye inogona kutotyisidzira kuvepo kwedu pachedu. Zvinogona kupokana kuti Coronavirus Covid19 Pandemic imhedzisiro yekuwedzera kukanganisa kwedu pane zvakasikwa.
Parizvino kuderera kwakakurumidza mumafomu mazhinji ehupenyu. Habitat inotora nguva yakareba kupora iri kurasika. Misiyano yeshiri, hove, butter butter uye nezvimwe zvipukanana zviri kuderera nekukurumidza. Izvi zvinogona kutaurwazve nekusiyana kwezvirimwa nemhuka dzakasiyana siyana, kusanganisira dzepamoyo uye nemhuka dzakaberekerwa.
Munguva pfupi yapfuura pakave nekutarisa kwakanyanya kushanduka kwemamiriro ekunze. Nekudaro zvisinei nezvese hurukuro uye tekinoroji nyowani dziri kuiswa mukushandiswa kwakanaka kunyanya kuburitsa simba, huwandu hwenyika hwese hwakasanganiswa hwekushandisa kabhoni kubva kumagetsi hausi kuderera nekudaro kurwisa kwedu kushanduka kwemamiriro ekunze hakuna kubudirira. Chimwe chikonzero cheizvi ndechekuti mapuraneti akaenzana nehuwandu hwevanhu ari kuwedzera uye kudyiwa kwemunhu wese kuri kuwedzera.
Shanduko yemamiriro ekunze ndechimwe chezvinhu zvinokanganisa kusiyana kwemarudzi. Takatarisana nehondo inosunungura nekushanduka kwemamiriro ekunze tinoda chaizvo chirongwa B kana zvimwe zvimwe zviito zvekuchengetedza zvipenyu. Ndiwo wenyaya yedu nyaya.
Kune mamwe masangano kunze uko ari kuita basa rakanaka, dzimwe hondo dziri kukundwa asi iyo hondo yekuparadzanisa zvipenyu kurasikirwa. Tinoda kuchinja izvo.
Urongwa hwedu hwakanaka
kuratidza kune vezvematongerwo enyika kuti vanhu vanoda mhedzisiro uye
kushanda nemasayendisiti uye mamwe masangano kubata zvipuka zvipenyu pakurasikirwa kwemusoro.
Iwe unogona kutibatsira kuita kuti chiratidzo chedu chizadzikiswe nekuparadzira izwi. Ndiko kugovana link yedu uye kukurudzira vanhu kuti varatidze rutsigiro rwavo nekujoina (kunyangwe kana zviri izvo zvese zvavanoita) uye / kana nekuzvipira uye / kana kupa.